Super Computer ရဲ့ ခန့်မှန်းမှုကို မန်ယူပရိသတ်တွေ သဘောကျမှာ မဟုတ်ဘူး
ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် ရာသီကုန် ရပ်တည်မှုကို Super Computer ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်
15 Nov 2018 . 5:01 PM
၂၀၁၈-၁၉ ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်ကတော့ ပြိုင်ပွဲကာလ (၃)ပုံ (၁)ပုံနီးပါးကို ရောက်ရှိလာပါပြီ။ ဒီအချိန်မှာ ချန်ပီယံ ဘယ်သူလဲဆိုတာ ပြောဖို့စောသေးပေမယ့် ခန့်မှန်းလို့ရနိုင်တဲ့အနေအထား ရှိနေပြီး ဘယ်လိုအပြောင်းအလဲတွေရှိလာမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမယ်။ အခုလောလောဆယ် လက်ရှိချန်ပီယံ မန်စီးတီးအသင်းက ရှုံးပွဲမရှိမှတ်တမ်းနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်အမှတ်ပေးဇယားကို ဦးဆောင်နေတယ်။ မန်စီးတီးနဲ့အတူ ရှုံးပွဲမရှိသေးတဲ့ လီဗာပူးလ်၊ ချယ်လ်ဆီးအသင်းတို့ကလည်း (၂)မှတ်၊ (၄)မှတ်အကွာကနေ မန်စီးတီးကို ဖိအား လိုက်ပေးနေကြတယ်။ ရာသီကုန်ကျရင် ဘယ်သူဗိုလ်စွဲမလဲ၊ ဘယ်အသင်းတွေ တန်းဆင်းရမလဲဆိုတာကလည်း ပရီးမီးယားလိဂ် ရာသီတိုင်းလိုလို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အရာတစ်ခုပါပဲ။ ဒါကြောင့် နာမည်ကျော် အားကစားဝက်ဆိုက်ဘ်ဖြစ်တဲ့ talksport က သူတို့ရဲ့ Super Computer ကို အသုံးပြုပြီး ရာသီကုန် ကျရင် ချန်ပီယံဖြစ်မယ့်အသင်း၊ တန်းဆင်းမယ့်အသင်းတွေကို အခုလို တွက်ချက် ဖော်ပြခဲ့ပါတယ် . . .
ရာသီကုန်မှာ ထိပ်ဆုံး(၆)သင်းနေရာ ရရှိမယ့်အသင်းများ
2. Chelsea (Champions League qualification)
3. Liverpool (Champions League qualification)
ရာသီကုန် ထိပ်ဆုံး(၆)နေရာအတွက် Super Computer ရဲ့ တွက်ချက်မှုကိုတော့ မန်ယူ ပရိသတ်တွေ သိပ် သဘောမကျနိုင်ပေမယ့် မန်စီးတီးပရိသတ်တွေကတော့ ကျေနပ်အားရနေပါလိမ့်မယ်။ မန်စီးတီးက ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံကို ဆက်ထိန်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီး မန်ယူကတော့ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်တောင် မရဘဲ အဆင့်(၆)နေရာသာ ရပ်တည်နိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အာဆင်နယ်အသင်းကိုလည်း ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့် မရနိုင်ဘူးလို့ ခန့်မှန်းခဲ့တာကတော့ လက်ရှိအာဆင်နယ်ရဲ့ ခြေစွမ်းအရ ဖြစ်နိုင်ပ့ါမလားဆိုတာ သံသယဖြစ်စရာပါပဲ။ တန်းဆင်းရမယ့် အသင်းတွေကို ဘယ်လိုခန့်မှန်းထားလဲ ကြည့်လိုက်ရအောင် . .
18. Fulham (relegated)
19. Huddersfield Town (relegated)
ဒါကတော့ သိပ်အငြင်းပွားစရာ မရှိလောက်ပါဘူး။ ဒီ(၃)သင်းစလုံးကလည်း တကယ့်ကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ရလဒ်တွေနဲ့ အမှတ်ပေးဇယားအောက်နားမှာ ရုန်းကန်နေရတဲ့အသင်းတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ ကဲ .. ပရိသတ်ကြီးရေ . .Super Computer ကတော့ ရာသီကုန်မှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ရပ်တည်မှုကို ခန့်မှန်းလိုက်ပါပြီ။ ဒီခန့်မှန်းချက်က ဘယ်လောက်အထိ မှန်ကန်မလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်လား . .
Photo:Irish Mirror,The National,Best World News,talksport
ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျ ရာသီကုနျ ရပျတညျမှုကို Super Computer ရဲ့ ခနျ့မှနျးခကျြ
၂၀၁၈-၁၉ ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျကတော့ ပွိုငျပှဲကာလ (၃)ပုံ (၁)ပုံနီးပါးကို ရောကျရှိလာပါပွီ။ ဒီအခြိနျမှာ ခနျြပီယံ ဘယျသူလဲဆိုတာ ပွောဖို့စောသေးပမေယျ့ ခနျ့မှနျးလို့ရနိုငျတဲ့အနအေထား ရှိနပွေီး ဘယျလိုအပွောငျးအလဲတှရှေိလာမလဲဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရမယျ။ အခုလောလောဆယျ လကျရှိခနျြပီယံ မနျစီးတီးအသငျးက ရှုံးပှဲမရှိမှတျတမျးနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျအမှတျပေးဇယားကို ဦးဆောငျနတေယျ။ မနျစီးတီးနဲ့အတူ ရှုံးပှဲမရှိသေးတဲ့ လီဗာပူးလျ၊ ခယျြလျဆီးအသငျးတို့ကလညျး (၂)မှတျ၊ (၄)မှတျအကှာကနေ မနျစီးတီးကို ဖိအား လိုကျပေးနကွေတယျ။ ရာသီကုနျကရြငျ ဘယျသူဗိုလျစှဲမလဲ၊ ဘယျအသငျးတှေ တနျးဆငျးရမလဲဆိုတာကလညျး ပရီးမီးယားလိဂျ ရာသီတိုငျးလိုလို စိတျဝငျစားစရာကောငျးတဲ့ အရာတဈခုပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ နာမညျကြျော အားကစားဝကျဆိုကျဘျဖွဈတဲ့ talksport က သူတို့ရဲ့ Super Computer ကို အသုံးပွုပွီး ရာသီကုနျ ကရြငျ ခနျြပီယံဖွဈမယျ့အသငျး၊ တနျးဆငျးမယျ့အသငျးတှကေို အခုလို တှကျခကျြ ဖျောပွခဲ့ပါတယျ . . .
ရာသီကုနျမှာ ထိပျဆုံး(၆)သငျးနရော ရရှိမယျ့အသငျးမြား
ရာသီကုနျ ထိပျဆုံး(၆)နရောအတှကျ Super Computer ရဲ့ တှကျခကျြမှုကိုတော့ မနျယူ ပရိသတျတှေ သိပျ သဘောမကနြိုငျပမေယျ့ မနျစီးတီးပရိသတျတှကေတော့ ကနြေပျအားရနပေါလိမျ့မယျ။ မနျစီးတီးက ပရီးမီးယားလိဂျခနျြပီယံကို ဆကျထိနျးနိုငျမှာဖွဈပွီး မနျယူကတော့ ခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့တောငျ မရဘဲ အဆငျ့(၆)နရောသာ ရပျတညျနိုငျမယျလို့ ခနျ့မှနျးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ အာဆငျနယျအသငျးကိုလညျး ခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့ မရနိုငျဘူးလို့ ခနျ့မှနျးခဲ့တာကတော့ လကျရှိအာဆငျနယျရဲ့ ခွစှေမျးအရ ဖွဈနိုငျပ့ါမလားဆိုတာ သံသယဖွဈစရာပါပဲ။ တနျးဆငျးရမယျ့ အသငျးတှကေို ဘယျလိုခနျ့မှနျးထားလဲ ကွညျ့လိုကျရအောငျ . .
ဒါကတော့ သိပျအငွငျးပှားစရာ မရှိလောကျပါဘူး။ ဒီ(၃)သငျးစလုံးကလညျး တကယျ့ကို ဆိုးဆိုးရှားရှား ရလဒျတှနေဲ့ အမှတျပေးဇယားအောကျနားမှာ ရုနျးကနျနရေတဲ့အသငျးတှေ ဖွဈနပေါတယျ။ ကဲ .. ပရိသတျကွီးရေ . .Super Computer ကတော့ ရာသီကုနျမှာဖွဈလာနိုငျတဲ့ ရပျတညျမှုကို ခနျ့မှနျးလိုကျပါပွီ။ ဒီခနျ့မှနျးခကျြက ဘယျလောကျအထိ မှနျကနျမလဲဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့လိုကျရအောငျလား . .